Manchester United oo Real Madrid ka qaadan rabto da'a yar caan ah kaas oo UCL kula guuleestay.
Friday, December 14th, 2018 - 00:59:57
Thursday January 11, 2018 - 11:25:17 in Wararka by Ak Caqil
Kooxda Manchester United ayaa u soo bandhigeeyso Real Madrid iyo xiddiga Marco Asensio heshiish qaali ah oo xiddiga reer Spain looga soo kaxeeynaayo dalkiisa iyo Kooxda caasimada ee Real Madrid sida laga soo xiganaayo wargeeyska Don Balon .
Asensio ayaa loo qadariyaa mid ka mid ah xiddigaha da’a yarta kuwooda ugu wanaagsan caalamka waqtigaan asiga oo leh tayo iyo hibo sare taas oo soo jeedisay Jose Mourinho.
Warar laga helaayo Jose ayaa sheegay inuu taageero weyn u yahay xiddiga waxaana uu Jose u arkaa Marco inuu yahay ninka ku soo dhaweeyn kara Man City sanadaha soo socdo hadii ay la soo saxiixdaan waxaana uu Jose u arkaa laacibkaan mid leh awood sare waloow ay adag tahay in Real Madrid ay iska iibisaa xiddiga reer Spain.
Asensio ayaa ka mid ahaa xiddigaha Real Madrid ee sanadkii hore dhigay wacdaraha asiga oo xitaa xilli ciyaareedkaan ku biloowday si wanaagsan waloow uusan heeysan form-kii wacnaa ee sanadkii hore hadana xiddiga ayaa la soo sheegayaa inuu wali Magaalada Madrid ku qanacsan yahay.